छेका - Mero Sabda
– जनार्दन कट्टेल (ऋषि शान्तिप्रिय)
पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसको बि.इ.फस्टइयरमा पढ्ने उनीसँग मेरो परिचय भएको थियो जतिबेला म भने सेकेण्ड इयरको सर्भेइङको कक्षाबाट फर्कदैथिएँ । कक्षा बहिरको कोरिडोरमा अनायसै हाम्रा आँखा चार भएका थिए । मैले दाँया तर्फबाट अघि बढ्न खोजे, उनी दाँया नै लाग्ने । म अर्को तर्फबाट जान खोज्दा उनी उतै जाने । एउटा मीठो बाटो छेकाई । दुबैको मुस्कानको प्रश्नोत्तर अनि “जान्छु है!” को सहमति र छुट्याईले एउटा जीवनामा हम्मेसी भुल्न नसक्ने प्रीतियुक्त चिनजान भएको थियो । त्यसपछि सर्भेइङको कक्षा मैले कहिल्यै बुझिंन । ध्यानजति उनीमै लगाएँ । साथीभाइसँग सोधेरै नाम पत्ता लगाएँ । सायद उनले पनि मेरो नाम त्यसरी नै पत्ता लगाइन् । त्यसपछि हामी एउटा सुन्दर प्रेम पंखी घोडामा सवार भयौं।
सेवामा मेरो निवेदन यो छ कि मैले मेरो छोरी निर्मला अधिकारीको सादीका निमित्त सबै तयारी पुरा गरे पनि अन्यायी दुलाहा पक्षबाट आलटाल गरी छेका भएको आज ९ महिना वितिसक्दा पनि विवाह अझैसम्म पनि सम्पन्न हुन नसकेकोले श्रीमानसमक्ष निवेदन गर्न आएको छु । अन्यायी जिल्ला सप्तरी डाक्नेश्वरी नगरपालिका वडा नं. ३ बस्ने बच्चु यादबको छोरा देवनारायण यादबले अन्याय गरेको व्यहोरा यो छ कि मिति २०७४/०९/२० गते ऐ. बस्ने देवनारयण यादबका छोरा श्री विषेश्वर यादबका साथ मेरी छोरीको विवाह निश्चित गरी तिलक दाइजोको रकम रु. १०,००,००० (दश लाख) समेत पक्का पक्की गरिएको तथा छेका पनि सम्पन्न भई सकेको छ । मैले आफ्नो घर घडेरी बेच बिखन गरी उक्त रकम तत्कालै दिइ सकेको छु । जसको भरपाई समेत यसैसाथ पेश गरेको छु । मेरी छोरी इन्जिनियर हो उसलाई पढाउँदा मैले जीवन भरीको कमाई खर्चेको छु । यस भन्दा बढी मेरो दाइजो तिलक दिने अर्थिक हैसियत समेत नभएकोमा अन्यायी दुलाहाको बाबु देबनारायण यादबले दहेज तिलक कमी भयो भन्दै अझै थप पाँचलाख तथा मोटरसमेत माग गरी सो उपलब्ध नगराए विवाह नहुने भन्दै मेरो इज्जत आमदमा समेत धक्का पुर्याई विवाह कार्यक्रम हाल सम्म पनि हुन नदिएकोले दुलाहालाई झिकाई विवाह कायम गराई पाँउ भनी श्रीमानसमक्ष यो निवेदन चढाएको छु ।
निवेदक जिल्ला सप्तरी विष्णुपुर गाँउपालिका वडा नं. ३ बरही बिरपुर बस्ने हरेराम अधिकारी । मिति २०७५/०८/१० गते रोज ३ शुभम् ।
-” हजुर ! हम्रा कनि न्याय दिलाई पाउनके खातिर यो निवेदन लिएर आएछु ।” बुढाले टेबलमा रहेको विवाहको कार्ड अट्याच गरिएको निवेदन उठाउदै भने । थाहा भयो – उनी निर्मलाका बाबु रहेछन् ।
मेरो जीवनको कथांश यति छिटो क्लाइमेक्समा पुगेको एक अर्थले राम्रो थियो । किनकी निर्मालालाई अझै प्रेमको लागि उनकै बाबुको अघि याचना गर्न सक्थें । तथापी यदि उनले मेरो बारेमा पहिल्यै भनिसकेको भए तथा परिवारबाट अस्वीकृत भई अर्को सम्बन्ध कायम हुने क्रममा यस्तो घटना भएको भए मेरो प्रस्ताबले निर्मलाको जीवनमा अझ जटिलताहरु ल्याइदिन सक्थ्यो । मेरो निर्मलाप्रति प्रेम निश्वार्थ थियो । परम्परागत कुनै प्रेम कथाहरुमा जस्तो बिरक्तिएर जीवन बर्बाद पार्ने जस्तो तहको आशक्ति थिएन र त्यसलाई प्रेमप्रतिको समर्पण ठान्न म सक्दिनथें । म त चाहन्थें उनलाई फूलले पनि नघोचोस् । किनकी उनलाई मैले प्रथम भेटदेखि नै हृदयमा राखेको थिएँ । म उनको पति हुन सकिन भने पनि उनको पति जो हो उसले मैले भन्दा बढी माया दियोस- मेरो कामना थियो । सम्भवत यो मेरो अन्य प्रेमीहरुभन्दा फरक सोच थियो । थाह छैन यो प्रेमसिद्धान्तले प्रेमशास्त्रलाई बलियो बनाउछ वा कमजोर ।
म त यसै पनि सम्हालिइसकेको थिएँ । भनें- “आमा होइन, बाबा । अनि यो सब के भयो ? यत्रो कुरा प्रगति गरेछौ है , म खुसी हुनु कि दुःखी ? मलाई यति छिटै बिर्स्यौ है ।” हामी बीचको प्रेमको गहिराइ र मेरो प्रश्नको गहिराईलाई हामी दुईले मात्र बुझौं । बाँकीले नबुझे हुन्थ्यो भनेर सतर्क थिएँ । केहि कुरा त भन्नै पर्‍यो उनको बाबलाई सोचेर उनको लागि थपें- ” हामी काठमाण्डुमा सँगै पढ्थ्यौ । साथी । पुरानै चिनजान हो ।”
छोरीको साथीलाई हाकिमको रुपमा पाएर बुढा हौसिए –”अरे बाप रे बाप, मलाई किन भनेनौ तिमीले ?” छोरीलाई त्यति भनेर बुढा म तिर फर्किए – “ल बाबु मेरो छोरीको साथी हुनुहुदोरहेछ, खुसी लाग्यो । हामीलाई सहयोग गर्नुपर्यो ।”
जे होस लेखक अहिले निरिह छ । ‘स्यालले अंगुर नपाए पछि, छोड्यो- अमिलो रहेछ भन्यो’ भन्ने उखानको प्रहार गर्न पाठक बृन्दलाई आफ्नो क्षमताअनुसार स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको छ ।
-“बिद्रोहको कुरा नगर्नु सर । हमर ज्वाईसाब अखन तक बहुत नीक आदमी अइछ । लेकिन ओकर बाबुके कोइ उछाइल देनेछे । मेरो परिवार र छोरीको इज्जतको सवाल छ । फेरि दहेज त मैले निर्मलाकै सुखका लागि दिएको हो । ये त हमसभके परम्परा अइछ । यदि निर्मलाको यो सादि रोकियो भने कुनै लडकाले उसलाई हेर्दैन ।”
–” म दुःखी छु हाम्रो सम्बन्धलाई मैले लाख कोशिष गरेर पनि निरन्तरता दिन सकिन । वास्तबमा मधेशीका ज्वाई पहाडिया हुन गार्हो रहेछ । यो मेरो असफलताको अनुभव हो । मलाई माफ गरेर बिर्सिदेऊ । बिन्ति छ । सकेसम्म असल साथीमा सिमित रहौला । हाम्रो सम्बन्धको बारेमा मेरो वहाँलाई थाहा छैन । यो सब मेरो हुनेवालाको वार्गेनिङ हो । हाम्रो फोनमा कुरा हुन्छ । वहाँले मलाई माया गर्नु हुन्छ । पीर मान्नु पर्दैन ।”
बाबु चैं अझै जिद्दी गर्दै थिए । प्रहरीमा लेखिदिनु पर्यो भन्दै थिए । तर निर्मलाले बाबुलाई आश्वस्त पार्न कोशिष गरी – ” एक चोटी छलफल गरौ न त, यँही । कुरा मिल्छ होला ।”
बाहिरको चियापसलमा कसैले रेडियो खोल्यो । “………… मुठी एक उँच छथीन सीयाके सजनवाँ हे…….सिया के सजनवा सखि हे दशरथ के ललनवाँ हे ……………… मुठी एक उँच छथीन ……. श्यामल गोर किशोर मनोहर आयल जनक भवनमाँ हे माथपर ……”